Cudurka laba-cirifoodka | Caafimaadka Maskaxda Texas | Xaaladaha Caafimaadka Maskaxda ee Caadiga ah
Cudurka laba-cirifoodka waa xaalad caafimaad oo maskaxeed. Dadka qaba laba-cirifoodka waxay leeyihiin isbeddel xagga niyadda ah, laga bilaabo inay dareemaan farxad aan caadi ahayn ama sare (manic) ama ay dareemaan si aad u hooseysa oo niyadjab leh. Isbeddellada niyadda ayaa dhacaya iyadoon loo eegin waxa ka dhacaya nolosha qofka. Isbeddelada niyadda xitaa wey isku qasmi karaan si qofku u dareemo jahwareer iyo niyad jab isku mar. Isbeddellada niyadda waxay socon kartaa maalmo illaa bilo, iyo xitaa sannado waxayna saameyn ku yeelan kartaa fikirka dadka, shaqeynta, iyo waxqabadyada maalinlaha ah. Daraasadda Caalamiga ah ee Cudurka Daraasadda ee 2013 waxay ogaatay in Bipolar I iyo II ay ku dhacaan qiyaastii 1.2% dadweynaha 1.
Sababta saxda ah ee laba-cirifoodka laba-cirifoodka lama yaqaan, laakiin hiddo-wadaha, deegaanka, qaabdhismeedka maskaxda, iyo kiimikada ayaa door ka ciyaari kara. Natiijooyinka ka soo baxay daraasadaha cilmibaadhista waxay muujiyeen in dadka leh qaraabo heerka koowaad ee xaaladdan leh, sida waalid ama walaal, ay aad ugu dhowdahay inuu ku dhaco cilladda. In kasta oo dadka waalidkood ama walaalohood qaba laba-cirifoodka ay u badan tahay inay la soo baxaan cilladda iyaga laftirkooda, inta badan dadka leh taariikh qoys ee cudurka laba-cirifoodka ayaan ku dhici doonin cudurka. Waxyaabaha deegaanka sida walaaca iyo naxdinta sidoo kale waxay u badan tahay inay sabab u yihiin horumarinta cudurka laba-cirifoodka.
Calaamadaha iyo Calaamadaha Cudurka Bipolar Disorder
Hurdo la’aanta ama xilliyada tamarta aan caadiga ahayn
Edgering ama xanaaq
Murugo joogto ah, walwal ama xaalad “madhan”
U fiirsasho la’aan
Dareen dambi, qiimo-darro ama ciirsi la’aan
Dareen kacsan ama xanaaq badan
Dareenka dambiga oo kordhay
Isbedelada rabitaanka cuntada ama hurdada – koror ama hoos u dhac
Xiiso la’aan hawlihii hore ee raaxada lahaa
Dareen rajo la’aan ah
Dareen iyo fikrado ah inaad dhimato
Is-dhaawicid ama dabeecad is-dilid
La mid ah xaaladaha kale ee caafimaadka maskaxda sida niyad jab iyo walaac , ma jiro baaritaan dhiig oo qaas ah ama daraasad sawir oo qof u sheegi karta inuu qabo cudurka laba-cirifoodka. La kulanka xirfadle iyo ka wada hadalka astaamaha waa talaabada ugu horeysa ee lagu ogaanayo ogaanshaha cudurka. Xaaladda ayaa jahwareer iyo xanuun ku noqon karta dadka la nool, iyo sidoo kale kuwa ay jecel yihiin. Nasiib wanaagse, waxaa jira daaweyn iyo fursado kale oo dadka ka caawiya sidii ay u maareyn lahaayeen xaaladda.
Cunsurka ugu muhiimsan ee qofku horay ugu socdo xaaladdu waa rajo. Rajada waa dareenka ah in uu jiro mustaqbal la gaari karo oo ay macquul tahay in mustaqbalkan la gaaro. Maalmaha qaar, qof qaba laba-cirifoodka ayaa laga yaabaa inuu kaligiis dareemo rajo. Kuwa kale, waxay u baahan karaan taageero ama caawimaad qof ay jecel yihiin ama qof iyaga daneeya si loo xusuusiyo inay rajadani suurogal tahay.
In kasta oo aan daawo loo helin xaaladda, in badan oo la nool laba-cirifoodka waxay awoodaan inay ku noolaadaan nolol buuxda, macno leh, iyo guul leh. Ku noolaanshaha si guul leh cilladda waxay u baahan tahay xirfado dhowr ah, sida ka shaqeynta ku xirnaanshaha dadka kale, la socoshada illaa taariikhda waxbarashada la xiriirta xaaladda iyo daaweynta, iyo sameynta nidaam caafimaad leh.
Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Cudurka laba-cirifoodka, booqo:
Machadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda (NIMH) macluumaad guud oo ku saabsan cudurka laba-cirifoodka.
Isbahaysiga Qaranka ee Cudurka Maskaxda (NAMI) macluumaad guud oo ku saabsan cudurka laba-cirifoodka.
Helpguide.org macluumaad guud oo ay kujiraan talooyin iskaa-wax uqabso ah oo loogu noolaado cudurka laba-cirifoodka.
Qeybta tababarka tooska ah ee ogaanshaha caafimaadka habdhaqanka ee ku saabsan cudurka laba-cirifoodka.
Ferrari AJ, Dukaammada E, Khoo JP, et al. Baaxadda iyo culeyska cudurka laba-cirifoodka: natiijooyinka ka soo baxay Daraasadda Caalamiga ah ee Cudurrada ee Daraasadda 2013. Laba-cirifoodka 2016; 18: 440‐50.